Reniranon’i Betsiboka : fahasahiranana lehibe ny famoaham-bokatra (NewsMada) | AEMW
Reniranon’i Betsiboka : fahasahiranana lehibe ny famoaham-bokatra (NewsMada)
Manahirana ny mponina, indrindra ireo mpamboly sy mpanangom-bokatra any amin’ny faritra Boeny ny fitaterana manaraka ny reniranon’i Betsiboka. Nanomboka ny taona 2000, simba avokoa ireo toerana fiantsonan’ny sambo mpitatitra olona sy entana. Fahasahiranana lehibe ny famoaham-bokatra mankany Marovoay avy any amin’ny kaominina Madirovalo, Manaratsandry, Maroala, Ambalatany, noho ny fahasimban’ny seranana fiantsonana any amin’ireo toerana ireo. Na ireo sambo mpitatitra aza, tsy azo antoka ny lafiny teknika, tsy manana taratasy na fiantohana ara-dalàna.
Tsy manan-tsafidy ny tantsaha sy ireo mpanangom-bokatra, tsy afa-miala amin’ny fitaterana manaraka ny reniranon’i Betsiboka, miantoka ny fitateram-bary, voanjo, voamaina isan-karazany, ankoatra ny mpandeha tsotra. Tsy ahitana antontanisa mazava ny momba ireo sambo ireo, fa ny fantatra am-polony maromaro izy ireo, mahazaka entana 20 t hatramin’ny 60 t, araka ny tanjany sy halehibeny.
Iza ny tena mpanara-maso ?
Saran-dalan’ny olona, miankina amin’ny toerana aleha : 2.000, 3.000 na 4.000 Ar ; saran’entana isaky ny gony : vary, 900 Ar ; voanjo, 2.500 Ar ; voamaina, 2.000 na 3.000 Ar. Samy manao izay tiany hatao ny mpitatitra rehetra ; tsy fantatry ny mponina, iza marina ny tena tompon’andraikitra mpanara-maso ireny sambo ireny ? Na izany aza, soa fa misy azy ireo hahazoana mamoaka ny vokatra, raha tsy izany vao mainka fatiantoka tanteraka ho an’ireo tantsaha any amin’ny distrikan’i Marovoay.
Nametraka laminasa ihany anefa ny APMF, nanokana tetibola ho fanarenana ny fitaterana amin’ireo renirano lehibe sy namolavola lalàna ho fisorohana ny loza. Anisan’izany ny reniranon’i Betsiboka. Nefa mbola tsy hita aloha izao ny fanombohana ny asa, araka ny filazan’ireo mpividy vokatra any an-toerana.
← Andapa : tsy voafehin’ny VOI ny fiarovana ny ala (NewsMada)
CUA : nankasitrahana ireo mpamafa lalana 500 (NewsMada) →